Mkpụrụ Semalt Na-enye Atụmatụ Ntụle Dị Elu
Google na ngwa engines ndị ọzọ na-adabere na sophisticated scraper web s iji wepu ọdịnaya ma depụta saịtị. Ndị ụlọ ọrụ, ndị mmemme, na ndị mmepe na-eji ejiji dị iche iche na ngwá ọrụ scraping iji nweta ọrụ ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụlite azụmahịa gị, ị ga-ewepụ ozi sitere na saịtị ndị dị ike na onye na-ewepụta data. Bubata. io na Kimono Labs bụ nhọrọ dị mma. Iji ngwaọrụ ndị a, ị nwere ike iwepụ ihe oyiyi n'ụzọ kwesịrị ekwesị. ContentBomb bụ otu n'ime ihe osise kachasị mma na ihe osise kachasị mma na Intanet. A na-akpọ aha ya kachasị iche iche na ebe a.
1. Na-enyere aka na ebe nrụọrụ weebụ na blọọgụ:
Ọ bụrụ na ị mepụtara blog ma ọ bụ saịtị na nso nso a ma chọọ ịkọwa ibe weebụ gị, ContentBomb bụ nhọrọ ziri ezi maka gị. N'adịghị ka ngwá ọrụ ndị ọzọ na-ekpochapu ọkụ, ọ na-efopụ ihe oyiyi gị ma na-eme ka usoro nsị na-adị mfe na ngwa ngwa. Ị nwere ike melite arụmọrụ ọchụchọ gị ma nwee ike ileba anya na àgwà nke ihe oyiyi na ContentBomb.
2. Nkọwapụta ego ntanetị ngwa ngwa:
Site na ContentBomb, ị nwere ike ịdọta ngwa ngwa ịntanetị site na ebe nrụọrụ weebụ dị iche. Tụkwasị na nke a, ịnwere ike ịdepụta ihe oyiyi sitere na ebe nrụọrụ weebụ ụgbọelu, saịtị ịzụ ahịa, saịtị nyocha, na netwọk ndị ọzọ yiri. Inye Ụdị ga-ewepu data site na ihe oyiyi achọrọ ma jiri ọnụ ahịa dị iche iche tụnyere ngwaahịa, na-eme ka ọrụ gị dị mfe. Nke kachasị mma bụ na ngwá ọrụ a adịghị edezi nkọwa ọnụahịa, ma ị nwere ike ịdabere na nsonaazụ ziri ezi nanị. Ọdịnaya dị mma iji tụnyere saịtị dị iche iche ma chekwaa data na nchekwa data ya.
3. Wepụ ihe ọ bụla ma nweta usoro ndị dị mma:
Ejiri ọdịnayaBomb iji kpochapụ ụdị data ọ bụla, dị ka ihe oyiyi, ederede, PDF akwụkwọ na faịlụ HTML.Ozugbo e mepụtara data ahụ n'ụzọ zuru ezu, ị nwere ike ichekwa ya na CSV ma ọ bụ JSON ma ọ bụ ibudata ya na draịvụ ike gị maka iji ọrụ ntanetị.
4. Ejikọta ọtụtụ isi mmalite ntanetị:
ContentBomb nwere ike ịchọta ntuziaka ịntanetị, RSS na ATOM ndepụta, ebe nrụọrụ weebụ akụkọ, njem njem (dịka Trivago na TripAdvisor), ebe e-commerce (Amazon na eBay) na netwọk ndị ọzọ. Ọ ga-achọpụta ihe bara uru na ihe ga-eme ihe nyocha dabere na ihe ị chọrọ. Ọ na-elekwasị anya na ebe nrụọrụ weebụ na saịtị nyochaa, na-ebute gị nsonaazụ dị mma n'otu ntabi anya. Ọ nwere ike iwepu ọdịnaya site na faịlụ JPG na PNG.
5. Kwusaa ọdịnaya dị mma na saịtị gị na-akpaghị aka:
Na ContentBomb, ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya ọdịnaya gị na ebe nrụọrụ weebụ na-akpaghị aka ma ọ dịghị mkpa ka ị gbanwee ọdịnaya ugboro ugboro.Ozugbo ebudatara ma rụọ ọrụ, ngwá ọrụ a ga-ahazi posts gị ma chekwaa oge gị ruo n'ókè. Ị nwekwara ike ịhọrọ site na ndebiri ya na gburugburu ya iji nye saịtị gị ihe dị ịrịba ama na ọkachamara.
6. Ihe niile gbasara ọkọlọtọ:
Ọfụma ọdịnaya kachasị mara maka botBomb modules ọ na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịgbanwe usoro dị iche iche. Site na ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịmepụta ụlọ akwụkwọ ntanetị, bulite vidiyo, na faịlụ vidio, na ịkekọrịta ọdịnaya gị n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla. Ọ na-ewepụtakwa data sitere na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi na dakọtara na usoro sistemụ na ihe nchọgharị weebụ. Ị nwere ike ịmepụta arụmọrụ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka ma mepụta njikọ n'ime na njikọ ndị ọzọ na ọrụ a Source .